Ndingasiphepha njani isohlwayo kwiPinterest? Follow ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Ndingaziphepha njani izohlwayo kwiPinterest?
Meyi 11, 2021 0 IiCententarios 295
Ngokwesiqhelo kuzo zonke iinethiwekhi zentlalo kungokwemvelo ukuba kukho izithintelo ezithile ukuze abasebenzisi bakwazi ukufumana umbono wento abavunyelweyo ukuyenza okanye hayi ngaphakathi kwiphepha ngalinye. Oku kuhlala kunjalo lithuba lokuhlonipha kunye nobuzalwana ekhoyo phakathi kwabasebenzisi kunye nabanini bewebhusayithi ezahlukeneyo.
Nangona kunjalo, amaphepha afana nePinterest avumela abasebenzisi ukuba balandele amanyathelo athile ukunqanda izohlwayo ezinokuthi kwiimeko ezininzi zibangele iziphumo eziqinileyo kulowo nalowo kubo. Ngokunjalo, kubalulekile ukuba ukhumbule ukuba ezi zigwebo zinokuchaphazela ii-algorithms kuthungelwano.
Ukuba abasebenzisi abatsalwa ngumxholo, "umlingo" weakhawunti unokulahleka kwaye ukusuka apho uqale uhambo lokuchacha. Kodwa ekubeni kukho isisombululo sayo yonke into, kunokwenzeka ukuba ususe nawuphi na umda ngokuthobela imigaqo ye-Intanethi.
Zithini izohlwayo kwiPinterest?
Njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla, iPinterest, njengamanye amaqonga, ibonisa uthotho lwemithetho okanye amanyathelo ekufuneka elandelwe ukunqanda ukuphulukana nezibonelelo ezibonelelwa liqonga ngokwalo. Akukho manyathelo amaninzi, kodwa abalulekile ukuze ukuhambelana komsebenzisi kwiphepha ligcinwe.
Nangona zifundwa njengemiyalelo, kulungile ukuba ibe kukungenelela ngoxolo ukuze kungabikho ngxaki kwaye ube nakho qhubeka nemisebenzi yakho yendalo kwiPinterest ukukhuthaza ukubandakanywa nokususa naziphi na izimvo okanye upapasho oluchaphazela uluntu.
Yintoni enokulahleka ngezohlwayo kwiPinterest?
Ngokucacileyo kwaye njengazo zonke iinethiwekhi zentlalo, iPinterest njengamanye amaqonga anikezela nge ukulahleka kweakhawunti yomntu kwimeko apho yaphula imigaqo ecetywayo. Ngenxa yoku, kunokwenzeka ukuba ubekho ngasemva kupapasho okanye ulahlekelwe yindawo yakho yokusebenza ukuba unxulunyaniswe nenye iakhawunti.
Ke ngoko, umbono olungileyo kukuphinda wenze umsebenzi owenziweyo ngaphandle kokukopa, inkqubo iya kuba nakho ukubamba nayiphi na impazamo okanye ukungabikho kwenyani.
Gwema izigwebo zePinterest
Akukho mfihlo kuye nakubani na ukuba unokulandela le mithetho ikhankanyiweyo ukuthintela inkcitho yexesha kwaye ngakumbi izibonelelo ngaphakathi kwiphepha ngokwalo.
Sukwenza iibhodi zesiporho
Xa usenza uthotho lwemifanekiso kodwa inezinto ezingafanelekanga kubasebenzisi, kunokwenzeka ukuba umxholo uxeliwe. Nokuba uhlala usebenzisa amakhonkco kunokwenzeka ukuba olu hlobo lwecala lunokunikwa.
Amagama aphambili angaphezulu
Kulungile ukusebenzisa iplagi ye-SEO njengomhlobo osenyongweni wezikhonkwane, kodwa akufuneki baxhatshazwe thintela ulwandle. Kungenxa yoko le nto kubalulekile ukuba udibane nomntu oyingcali kwaye afezekise amathuba amahle.
Hlala kude nezithuko
Kuyimfuneko ukuba umsebenzisi ahlale enxibelelana, kodwa kufuneka rhoqo aphephe ukuthukwa okanye iimpikiswano. Eli phepha ngokwalo linakho ukuhambisa abafuna ingxaki kwaye libahlawulise ngeakhawunti.
1 Zithini izohlwayo kwiPinterest?
1.1 Yintoni enokulahleka ngezohlwayo kwiPinterest?
2 Gwema izigwebo zePinterest
2.1 Sukwenza iibhodi zesiporho
2.2 Amagama aphambili angaphezulu
2.3 Hlala kude nezithuko
Uyenza njani iakhawunti ye-Instagram?
Ungasikhuphela njani isicelo seYouTube kwiselfowuni?